‘बलि दिन’ किशोरी तस्करी ! - Everest Dainik - News from Nepal
‘बलि दिन’ किशोरी तस्करी !
सप्तरीको दौलतपुर–३ की एक किशोरीलाई बुधबार सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकाबाट उद्धार गर्‍यो। किशोरीलाई भारतमा बलि चढाउनका लागि मानव तस्कर गिरोहले सुनसरीको कोसी–३ भन्टाबारी हुँदै सीमा कटाउन लाग्दा प्रहरीले बचाउन सफल भएको हो। उनलाई प्रलोभनमा पारी फकाएर भारत लैजाँदै गरेका एक युवतीसहित तीनजनालाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ।
बलि दिनकै लागि भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा असोज ५ गते सुनसरीको रामधुनी–५ की १७ वर्षीया किशोरीलाई भारतीय सीमाबाट प्रहरीले उद्धार गर्‍यो। विराटनगर–१७ इस्लामपुरको बाटो हुँदै उनलाई एक गिरोहले बिक्री गर्न भारत लैजाँदै थियो।
याे पनि पढ्नुस 'बलि दिन' फेरि एक किशोरीलाई भारत लैजान खाेज्ने ३ जना पक्राउ, १२ लाखमा डील भएको आशंका
धर्म, खानपानजस्ता विषयमा उक्त गिरोहले प्रश्न गरेपछि ती युवतीले आफू फन्दामा परेको थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरिन्। प्रहरीले उनलाई पछ्याउँदा घटनामा संलग्न ७ मध्ये ६ जना विराटनगर र १ जना काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए।
नेपाली युवतीलाई भारतमा बलि दिनका लागि लैजाने समूहमा बढी पुरुष हुन्छन्। तर, युवती फकाउन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्‍याउन महिलाकै संलग्नता हुने गरेको छ। माथि उल्लिखित घटनामा पनि किशोरीलाई फकाएर भारत लैजान महिलाकै प्रयोग भएको देखिएको छ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं वन्यजन्तुका अंग तस्करीको हब बन्दै
प्रदेश–१ का सीमा हुँदै नेपाली युवतीलाई भारतमा बलि दिन लगिएका घटनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन्। ‘यो कार्य निन्दनीय छ, सबैभन्दा पहिले त परिवारका सबै सदस्य सचेत हुनुपर्छ, समाज र परिवार सचेत भए घटना रोकिन्छन्’, उनले भने। नेपाली महिलालाई भारतमा बेचिनबाट रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै प्रदेश १ का सीमा क्षेत्रमा माइती नेपाल र साना हातहरूलगायतका संस्था सक्रिय रहेका बताइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छ ।
ट्याग्स: तस्करी, बलि